Inona no tokony atao raha ny gorodona no vaky - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tokony atao raha ny gorodona no vaky
Torohevitra momba ny fanamboarana gorodona:
1. Ny takelaka vita amin'ny loko dia vaky sy amboarina, ary kitapo kely no mipoitra eo amin'ny gorodon'ny gorodona. Henjana ny sarimihetsika hosodoko satria ny gorodona dia mitarika hazavana na rivotra maharitra, ary maina ny gorodona ary mihena.
Vahaolana: misy olom-bitsy mahavita manafoana sy mihena. Amin'ny tranga sarotra, ny hoso-doko ihany no azo hamafosina. Tsotra be ny fomba, fasika voalohany ilay faritra efa misy feta misy esory hanala feta, avy eo hamafa azy amin'ny lamba malefaka, mando palaka na mampihatra sarimihetsika polyester.
2. Ny fikarakarana fanoratana ny birao gorodona.Mba ny gorodona noporetaka kely dia azonao atao ny manisy fangarony mba hamenoana ny gorodon-tany; Vidio ny modely takiana amin'ny fanamboarana.
3. Ny fanamboarana làlana eo anelanelan'ny gorodona.Raha mihoatra ny 2MM ny hantsana anelanelan'ny gorodona dia takiana ny fikolokoloana ny fikojakojana.Raha latsaky ny 2MM ny fihemorana, tsy ilaina ny fikolokoloana. Amin'ny tranga henjana, esory ny gorodona tanteraka, aparitaka indray ary manolo ny ampahany amin'ny gorodona ilaina raha ny tokony ho izy .. Amin'ity vanim-potoana ity, ny fantsom-pivelarana dia tsy maintsy natokana mba tsy hahitatra ny tany rehefa lena.
4. Fahalavoana gorodona hirika fanamboarana aza manahy, any amin'ny fahalavoana, hazo gorodona famoretana noho ny vanim-potoana antony, dia fahita matetika sy ara-dalàna tranga. Koa satria ny fahalavoan 'ny rivotra dia somary maina, hazo gorodona famoretana noho ny hamandoana dia tsikelikely volatilization, namboatra koa rehefa afaka izany andro izany, raha ny marina, ny rano mbola manohy no lasa etona, dia mbola azo atao ny indray mitresaka. Noho izany, ny olana lehibe kokoa ny famoretana avy amin'ny tany ao amin'ny fahalavoana, dia mety ho kely nahemotra ny fotoana hanamboarana, aza maimaika hanamboarana.
Inona no tokony atao raha ny gorodona no vaky Ny atiny mifandraika